Soo dejisan AccuWeather 4.1 – Vessoft
Soo dejisan AccuWeather
AccuWeather – software awood leh si aad u eegto cimilada saadaalinayaa adduunka oo dhan. Software wuxuu kuu ogol yahay in ay doortaan magaalada lagama maarmaan ah oo u ogaato oo ku saabsan isbedelka ee heerkulka, xawaaraha dabaysha, qoyaan, cadaadis, heerarka roobab iwm AccuWeather u saamaxaaya in ay saacadiiba arkaan iyo muddo-dheer saadaasha cimilada ee foomka of jaantus. Software ka kooban module warka si ay ula socdaan isbedelka la dambeysta ah ee cimilada iyo saadaasha arkaan video ah. AccuWeather macaamila Google Maps ah oo muujineysa heerka daruurta iyo jihada of duufaanaha ee qaybo kala duwan oo dunida ah. AccuWeather kale oo ku jira qalab ay u Customize qaab waqtiga, hababka cabbirka iyo isla markiiba la wargeliyo.
Saadaasha cimilada adduunka oo dhan
Macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan isbedelka cimilada oo
Waxaa la dhisay-in qaybta wararka
Dhexgalka Google Maps
Joogitaanka nidaamyada ton oo British cutubyo
AccuWeather Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... TuneIn Radio 14.7.13402
العربية, English, Українська, Français... AdAway 3.1.2
العربية, English, Русский, Bahasa Indonesia... GO Launcher EX 1.12
العربية, English, Українська, Français... Angry Birds 6.0.1
العربية, English, Українська, Français... Castle TD 1.6.3
English, Deutsch, 中文, Русский... Eeg software more